India Auto Expo 2020 မှာပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်း Full Size SUV အသစ်များ - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > News > International News > India Auto Expo 2020 မှာပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်း Full Size SUV အသစ်များ
India Premier Auto Expo ဆိုတာ ဒီဇိုင်းစုံ အရွယ်အစားစုံကားမော်ဒယ်လ်သစ်တွေကို စတင်မိတ်ဆက်ပြသတဲ့ပွဲတြစ်ခုဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်တိုင်းကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ကားပြပွဲပါ။ ဒီနှစ် (၂၀၂၀) ပွဲမှာလည်း မြင်တာနဲ့သဘောကျသွားလောက်တဲ့ ကားအမျိုးအစားများစွာကို မိတ်ဆက်ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကားတွေထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Full Size SUV ကားသစ်၅ စီးရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
MG Gloster ကို အိနိယမှာနာမည်ကြီးခဲ့ဖူးတဲ့Maxus D90 ကို အခြေခံထားတာဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။
တခြား အမျိုးအစားတူ SUV တွေထက် ကအရွယ်အစားပိုကြီးပါတယ်။ i-FSMART connected car technology,apanoramic sunroof,adigital instrument display, LED headlamps တွေပါဝင်နေပြီး 215PS and 480Nm ရရှိနိုင်တဲ့ 2.0-litre twin-turbo diesel engine ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
Great Wall Motors က Auto Expo 2020 မှာ Haval H9. It locks horns with the Ford Endeavour, MG Gloster, Toyota Fortuner and Mahindra Alturas G4 in India Infotainment, Panoramic Sunroof တွေအပြင် တခြားနည်းပညာသစ်တွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ China-spec model က 221PS 2.0-litre petrol ဖြစ်ပေမဲ့ India-spec model ကတော့ diesel motor နဲ့ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
Third Row Seat ပါဝင်လာတဲ့ Tata Gravitas မှာ Panoramic Sunroof ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Electric Parking Brake (Auto Hold Function ) စနစ်တော့ ပါဝင်လာပါတယ်။ ပါဝါ 170PS နဲ့ ရုန်းအား 350Nm ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ BS6-compliant 2.0-litre Multijet engine တပ်ဆင်ထားပြီး 6-speed manual နဲ့ 6-speed auto နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်နဲ့ အတွင်းခန်းတွေရဲ့အရောင်လိုက်ဖက်ညီနေခြင်းက ကားရဲ့သွင်ပြင်ကို ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိလာစေပါတယ်။
Hexa Safari Edition မှာ BS6 norms ထိရအောင်အဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ familiar 154PS 2.2-litre Varicor motor
တပ်ဆင်ထားပြီး all-wheel drive နဲ့ပဲရနိုင်မှာပါ။ Standard Hexa ကိုတော့ Automatic ဂီယာ၊ RWDနဲ့ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
The Volkswagen Tiguan Allspace ကတော့ ရုပ်ထွက်ပိုင်းပြန်ဆန်းသစ်ထားသလို Third Row Bench လည်းထည့်ထားလို့ အလျားပိုရှည်လာပါတယ်။ အတွင်းခန်းအတွက် digital instrumen နဲ့ car technology အသစ်တွေပါဝင်လာမှာပါ။ ပါဝါ 190PS နဲ့ ရုန်းအား 320Nm ရစေမယ့် 2.0-litre TSI engine ကိုအသုံးပြုထားပြီး 7-speed DSG၊ 4MOTION all wheel drive system နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Skoda Kodiaq TSI မှာ ပါဝါ 190PS နဲ့ ရုန်းအား 320Nm ရရှိနိုင်စေမယ့် 2.0-litre TSI engine ကိုသုံးထားပါတယ်။
7-speed DSG၊ all-wheel-drive system နဲ့ ဖြစ်ပြီး 2020 အကုန်လောက်မှာ ဈေးကွက်ထဲရောက်လာဖို့ရှိပါတယ်။
India Premier Auto Expo ဆိုတာ ဒီဇိုငျးစုံ အရှယျအစားစုံကားမောျဒယျလျသဈတှကေို စတငျမိတျဆကျပွသတဲ့ပှဲတွဈခုဖွဈပွီး နှဈစဉျတိုငျးကငြျးပလေ့ရှိတဲ့ကားပွပှဲပါ။ ဒီနှဈ (၂၀၂၀) ပှဲမှာလညျး မွငျတာနဲ့သဘောကသြှားလောကျတဲ့ ကားအမြိုးအစားမြားစှာကို မိတျဆကျပွသသှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီကားတှထေဲမှာ စိတျဝငျစားစရာအကောငျးဆုံးဖွဈခဲ့တဲ့ Full Size SUV ကားသဈ၅ စီးရဲ့အကွောငျးကို ဖောျပွပေးလိုကျပါတယျ။
MG Gloster ကို အိနိယမှာနာမညျကွီးခဲ့ဖူးတဲ့Maxus D90 ကို အခွခေံထားတာဖွဈထုတျလုပျထားတာပါ။
တခွား အမြိုးအစားတူ SUV တှထေကျ ကအရှယျအစားပိုကွီးပါတယျ။ i-FSMART connected car technology,apanoramic sunroof,adigital instrument display, LED headlamps တှပေါဝငျနပွေီး 215PS and 480Nm ရရှိနိုငျတဲ့ 2.0-litre twin-turbo diesel engine ကိုအသုံးပွုထားပါတယျ။
Great Wall Motors က Auto Expo 2020 မှာ Haval H9. It locks horns with the Ford Endeavour, MG Gloster, Toyota Fortuner and Mahindra Alturas G4 in India Infotainment, Panoramic Sunroof တှအေပွငျ တခွားနညျးပညာသဈတှလေညျး ပါဝငျနပေါတယျ။ China-spec model က 221PS 2.0-litre petrol ဖွဈပမေဲ့ India-spec model ကတော့ diesel motor နဲ့ဖွဈမယျလို့မြှောျလင့ျရပါတယျ။
Third Row Seat ပါဝငျလာတဲ့ Tata Gravitas မှာ Panoramic Sunroof ပါဝငျမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ Electric Parking Brake (Auto Hold Function ) စနဈတော့ ပါဝငျလာပါတယျ။ ပါဝါ 170PS နဲ့ ရုနျးအား 350Nm ထုတျပေးနိုငျတဲ့ BS6-compliant 2.0-litre Multijet engine တပျဆငျထားပွီး 6-speed manual နဲ့ 6-speed auto နဲ့ ဖွဈပါတယျ။
အပွငျနဲ့ အတှငျးခနျးတှရေဲ့အရောငျလိုကျဖကျညီနခွေငျးက ကားရဲ့သှငျပွငျကို ပိုဆှဲဆောငျမှုရှိလာစပေါတယျ။
Hexa Safari Edition မှာ BS6 norms ထိရအောငျအဆင့ျမွှင့ျထားတဲ့ familiar 154PS 2.2-litre Varicor motor
တပျဆငျထားပွီး all-wheel drive နဲ့ပဲရနိုငျမှာပါ။ Standard Hexa ကိုတော့ Automatic ဂီယာ၊ RWDနဲ့ ရနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
The Volkswagen Tiguan Allspace ကတော့ ရုပျထှကျပိုငျးပွနျဆနျးသဈထားသလို Third Row Bench လညျးထည့ျထားလို့ အလြားပိုရှညျလာပါတယျ။ အတှငျးခနျးအတှကျ digital instrumen နဲ့ car technology အသဈတှပေါဝငျလာမှာပါ။ ပါဝါ 190PS နဲ့ ရုနျးအား 320Nm ရစမေယ့ျ 2.0-litre TSI engine ကိုအသုံးပွုထားပွီး 7-speed DSG၊ 4MOTION all wheel drive system နဲ့ဖွဈပါတယျ။
Skoda Kodiaq TSI မှာ ပါဝါ 190PS နဲ့ ရုနျးအား 320Nm ရရှိနိုငျစမေယ့ျ 2.0-litre TSI engine ကိုသုံးထားပါတယျ။
7-speed DSG၊ all-wheel-drive system နဲ့ ဖွဈပွီး 2020 အကုနျလောကျမှာ ဈေးကှကျထဲရောကျလာဖို့ရှိပါတယျ။
Tags Auto ExpocarsIndiaSUV